Wareeg Apple ah? Patent-kan Apple wuxuu kuu ogolaanayaa inaad milicsato | Wararka IPhone
Apple Watch wareeg ah? Patent-kan Apple wuxuu kuu ogolaanayaa inaad soo jaleecdo
Waa mid ka mid ah doodaha aan sida ugu badan uga maqlo waddada kuwa weli diidan inay la wareegaan Apple Watch. Naqshadeynta laba jibbaaran ma qanciso qof walba, iyo inkasta oo badankood ay tahay dabeecad u gaar ah oo xitaa ka duwan tartankaQaar kale waxay u arkaan cillad naqshadaysan oo aan iyaga qancinayn kana fiirsanayn iibsashadooda. Dhammaantood ma lumaan sababtoo ah patent cusub oo Apple ah ayaa si sax ah uga hadlaya tan.
Shaashad wareeg ah oo si gaar ah loogu dabaqi karo saacadda saacadda, taasi waa waxa patent-ka ah ee Patently Apple uu noo muujiyay uu tilmaamayo, iyo in wuxuu ka tagayaa albaabka Apple Watch cusub oo wata gebi ahaanba naqshad cusub taasi waxay soobixi kartaa mustaqbalka dhow, mustaqbalka fog ama aan waligeen arki doonin.
Shahaadadu waxay xustay xog farsamo badan oo inteena badani gabi ahaanba aan la fahmi karin, laakiin waxaan soo koobi karnaa in Apple ay saameyn ku yeelaneyso in shaashadaha wareega aysan ku fiicneyn qeexitaan ahaan. Pixels waa laba jibbaarane, aakhirkana isku xirka fagaarayaasha badan wax wareegsan micnaheedu waa luminta dusha faa'iido leh si heer sare ah ama ka yar. Taasi waa mid ka mid ah caqabadaha uu keenay Apple oo aad moodo in injineeradiisu ay isku dayayaan inay yareeyaan, iyagoon ogeyn inay hadda xallinayeen iyo in kale.
Tartanku wuxuu doortey nashqado badan oo muxaafid ah, oo leh saacado saacado oo u eg saacado dhaqameed, isla markaana adeegsada is-dhexgal u eg saacadaha dhaqanka. Tani waa wax ay isticmaaleyaal badani weydiiyaan Apple Watch, laakiin haddii aan tixgelinno taas saacadaha dhaqameed badankood waa wareegsan yihiin, oo ku xiridda wareeg wareeg ah saacadda laba jibbaaran uma muuqato mid aad u wanaagsan. Taasi waa sababta daahfurka wareega Apple Watch uu yahay riyada dad badan. Sida shatiyada oo dhan, waa inaan sugnaa laakiin cidna dammaanad kama qaadi doonto inay tani arki doonto Iftiinka mar uun.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Apple Watch wareeg ah? Patent-kan Apple wuxuu kuu ogolaanayaa inaad soo jaleecdo
Android P waxay si rasmi ah u xaqiijineysaa korsashada tilmaamaha iPhone X
Farriimaha tooska ah ee la duugay ayaa goor dhow gaari kara Twitter-ka